Mailaka amin'ny asidra: fanandramana mailaka, fikaroham-bahaolana ary fanao tsara indrindra | Martech Zone
Mailaka amin'ny asidra: fitsapana amin'ny mailaka, fikaroham-bahaolana ary fomba fanao tsara indrindra
Alarobia, Martsa 23, 2016 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
Misy antony ny ankamaroan'ny orinasa mikasa ny handany fotoana sy vola bebe kokoa amin'ny marketing amin'ny mailaka amin'ny 2016: marketing amin'ny mailaka manohy mitazona ny ROI avo indrindra amin'ny fantsom-barotra nomerika rehetra.
Ny mpivarotra rehetra dia manana ny lisitry ny serivisy mailaka tiany sy ny lisitry ny fampandrosoana ny mailaka. Saingy matetika loatra dia tsy raharahain'izy ireo ny votoatin'ny fampielezan-kevitra: manandrana ny mailaka ataon'izy ireo amin'ny fitaovana sy mpanjifa marobe alohan'ny hametrahana ny fampielezan-kevitra. Na dia fanentanana fitsapana maro aza amin'ny fandefasana mailaka amin'ny boaty iPhone na Gmail azy ireo dia tsy ampy izany. Nahoana? Satria samy hafa ny fandikan'ny mpanjifa mailaka ny kaody.
Mailaka amin'ny fijerena asidra
Email amin'ny Acid manome ny fitsapana mailaka, ny famahana olana ary ny fandrosoana Analytics fitaovana hanampiana ireo orinasa hanatsotra sy hanatsara ny ezaka marketing amin'ny mailaka ataon'izy ireo. Ny orinasa dia mizaha ny fanentanana amin'ny mailaka amin'ny mpanjifa mailaka 45 sy fitaovana samihafa ary manome fitaovana hamahana ny olana amin'ny fandefasana. Niorina tamin'ny taona 2009, ny mailaka tamin'ny Asid dia nanampy orinasa maherin'ny 80,000 manerantany hitsapa ny mailak'izy ireo.
Mampiasa mailaka amin'ny asidra ny mpivarotra mba hanatsorana ny mailaka fanandramana noforonina avy tany am-boalohany sy tao anaty mpamatsy serivisy mailaka rehetra. Saingy tsy izay ihany — Ny mailaka amin'ny asidra dia manome fitaovana hafa isan-karazany, ao anatin'izany:
Ny fanamafisana ny rohy sy ny sary
Famakafakana kaody sy mpanatsara ny HTML
Topi-maso ireo pejin-tranonkala sy fitaovana finday marobe
Ho fanampin'ireo fitaovana enti-miasa ao aminy, Email amin'ny Acid dia manolotra loharano maro sy fanohanan'ny mpanjifa tsy manam-paharoa. Sehatra ho an'ny vondrom-piarahamonina misy mpivarotra mailaka, mpanera ary mpamorona mailaka no azon'ny rehetra ampiasaina maimaimpoana. Ary ny Email amin'ny Acid Resource Center dia mampiantrano tranomboky misy maodely mailaka mamaly sy hybrid maimaimpoana maimaimpoana, torolàlana, whitepapers ary maro hafa.
Ny maha-zava-dehibe ny fitsapana ny mailaka
Ny mpanjifa mailaka sy ny fitaovana finday dia mampiseho HTML hafa satria ny mpanjifa tsirairay dia mandika HTML amin'ny fomba manokana. Izay no mahatonga ny kaody anao avela hohamarinina ao amin'ny Outlook nefa tsara tarehy amin'ny mpanjifanao Gmail.
Raha tsy manandrana mamantatra ireo olana momba ny kaody sy ny fandefasana ianao alohan'ny hampielezana ny fampielezan-kevitrao dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fifandraisan'ny mailaka (sy ny marika ary ny ROI) izany. Raha ny marina dia 70 isan-jaton'ny olona no milaza fa hamafa mailaka avy hatrany izy ireo raha tsy manome araka ny tokony ho izy ao anaty boaty.
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fampivoarana ny mailaka
Raha vaovao amin'ny tontolon'ny mailaka ianao dia mety ho hitanao fa mavesatra be daholo ireo fampahalalana rehetra ireo. Ny teknikan'ny fanaingoana tranonkala maoderina dia tsy misy fanohanana firy amin'ny mpanjifa mailaka ary mandritra izany fotoana izany ny olona dia milaza aminao foana ny hampiasa latabatra. Ity misy zavatra, ilaina ny latabatra amin'ny kaody mailaka, koa mikasa ny ho lasa manam-pahaizana manokana ao amin'izy ireo. Torohevitra vitsivitsy:
Famolavolana tsanganana tokana manamora ny fiainana! Ampy ho an'ny ankamaroan'ny mailaka (faningana ny gazety) ary hanamora ny fandraisana ireo fitaovana finday.
Mampiasà 600px ho an'ny sakany hifanaraka tsara amin'ny ankamaroan'ny mpanjifa amin'ny Internet sy amin'ny birao. Ny habe dia azo aidina ambany mba hifanaraka amin'ny efijery finday amin'ny alàlan'ny fangatahana haino aman-jery na famolavolana hybrid ranoka (vakio bebe kokoa momba izany).
Rehefa misy fisalasalana, latabatra. Manadino divs sy mitsingevana. Ny latabatra no fomba azo itokisana indrindra hahatratrarana lamina tsy miovaova. Ity teknika ity no fototry ny famolavolana valinteny sy madiodio ary mamela anao hanararaotra ny toetran'ny fampifanarahana handrafitra ny volavolanao.
Ataovy ao an-tsaina ireo mpampiasa finday. Ny mpamorona sasany aza nivadika ho famolavolana "finday aloha". Ity fomba ity dia mahomby indrindra amin'ny mailaka tsotra toy ny famerenako ny teny miafina, ny mailaka transactional ary ny fanavaozana ny kaonty.
Ary ny mailaka amin'ny Asid dia vao namoaka a mpamoaka mailaka miorina amin'ny tranonkala maimaim-poana. Ity mpamoaka lahatsoratra ity dia mamela ny mpampiasa hanangana, hanova, hanao topy maso ary hanatsara ny mailaka amin'ny fampiharana iray amin'ny fotoana tena izy.
Fitsapana, fitsapana, fitsapana!
Mety ho sarotra ny fanaovana kaody mailaka. Ny fomba tokana ahazoana antoka fa ho tsara ny mailaka anao na aiza na aiza dia ny fitsapana azy. Ny mailaka amin'ny Asid dia afaka manampy amin'izany amin'ny famoronana pikantsary ny mailakao amin'ireo mpanjifa mailaka malaza indrindra sy fitaovana ao anatin'ny 30 segondra.
Ho fanampin'ny serivisy fanandramana mailaka, ny mailaka amin'ny Acid dia manolotra toro-hevitra sy fampahalalana olana momba ny olana rehetra sendra anao, ny fitsapana spam mialoha ny fanaparitahana ary ny mailaka nandroso taorian'ny fametrahana Analytics. Ny orinasa koa dia manoratra bilaogy miavaka mandrakotra lohahevitra toa izany Famaharana ny halavan'ny tsipika amin'ny mailaka HTML or Trick sy tranokala fampiroboroboana mailaka tsara indrindra.
Miaraka amin'ny fahamaroan'ny mpanjifan'ny mailaka sy ny fitaovana misy, tsy mora ny fitsapana mailaka; ilaina izany. Raiso amin'ny sehatra manaraka ny ezaka mailakao:
Misorata anarana amin'ny fitsapana email fito andro amin'ny asidra!
Tags: mailakampanamboatra mailakafamolavolana mailakafampandrosoana mailakampamoaka mailakamailaka amin'ny asidrafandefasana mailakafitsapana mailakasakan'ny mailakamailaka findaympamoaka mailaka miorina amin'ny tranonkala
Inona no teknolojia ampiasain'ny mpivarotra C-Level?
ROBO: Ahoana ny fikarohana ataon'ny mpivarotra an-tserasera sy ny fividianana offline
Apr 18, 2016 amin'ny 10: 19 AM
Torohevitra mahafinaritra! Toa fitaovana lehibe iray io, na dia efa mampiasa GetResponse aza aho. Tena zava-dehibe ny fanaovana fitsapana A / B amin'ireo fampielezana mailaka. Misy zavatra toa tsara tsy mety amin'ny hevitry ny hafa.